Sazian’i Shina Ny Lotte, Koreana Mpaninjara, Noho ny Tahotra Ny Rafitra Balafomanga Mahataka-davitr’i Etazonia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Avrily 2017 4:49 GMT
Ataon'ny mpanao saiitatra politika @ badiucao ho tahàka ny sarin'ny ” Fiokona Vaovaon'ireo mpanao ady totohondry” ny fanentanana hanaovana ankivy ny Lotte. Sary avy amin'ny @badiucao.
Nihamafy ny tsy fifankahazoana teo amin'i Shina sy Korea atsimo momba ilay rafitra balafomanga mahataka-davitra an'ny tafika amerikana, tamin'ny herinandro lasa iny, niaraka tamin'ny fanaovana ankivy nihanaka be nanjo ny Lotte, ilay Koreana mpaninjara.
Tamin'ny volana Novambra teo, nanambara ny Lotte fa nanaiky hanome ilay kianjany filalaovana golf any Korea Atsimo ho fitobian'ny tamba-pitaovan'ny Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) [ Fiarovana ny Faritry ny habakabaka ]. Noheverina hanakanana izay fanafihana ataon'i Korea Avaratra io rafitra fiarovana amin'ny balafomanga mahataka-davitra io, nefa atahoran'ny fitondrana shinoa ho mety hivadika any amin-dry zareo io indray andro any.
Ny masoivohom-baovaom-panjakana Xinhua News no haino aman-jery mpanangom-baovao Shinoa voalohany nanomboka niantso ny fanohanan'ny Lotte ny fampiasànkery ataon'ny THAAD sy nanohy hamoaka tsikera hatramin'ny tapaky ny volana Febroary. Toy izao, ohatra, no vakin'ny fanehoankeviny tamin'ny 27 Febroary :
Mandefona ivoho an'i Shina ny fametrahana ny THAAD, tahaka ny fanampiana Tigra mpandatsa-drà iray [ loza mitatao ho an'ny fiarovana ny olona] ny fanapahankevitra tsy am-piheveran'ny Lotte. Tsy hanaiky an'i Lotte i Shina.
Tamin'ny fampitàna ny voalazan'ny Xinhua, ny gazetiboky kely tia tanindrazan'ny Global Times shinoa, tao amin'ilay lahatsoratra fanadihadiana nataony tamin'ny teny shinoa nampitondraina ny lohateny hoe “Ravao ny Lotte ary sazio i Korea Atsimo, Tsy manan-tsafidy ankoatra izay i Shina” dia niantso fanaovana ankivy koa. Nitatitra ny fanehoankevitra sy nanasongadina ny hatezeran'ireo mpisera amin'ny aterineto amin'ny Lotte ny dikateny Anglisin'ilay Global Times, isan'izany ireto manaraka ireto :
Tsy nanaiky anareo i Shina, azafady ento any ny helonareo ary ‘ndehana miverina
Lojika tsotra izany… Mahazo tombontsoa ara-bola avy amin'ireo Shinoa mpanjifa ny Lotte, amin'izao fotoana izao, mijoro manohitra antsika izy ary manohana ny governemanta Koreana tatsimo. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, ampiasain'io vondrona io ny volantsika mba hampihorohoroana antsika. Ahoana no andeferan'i Shinoa amin'izany ?
Tsy niandry ela fa tonga dia asa ilay teny. Taorian'ilay antso fanaovana ankivy dia nandray fepetra hanasaziana ny Lotte ny fitondrana Shinoa. Hatramin'izao dia toeram-pivarotana mpaninjara efatra an'ny Lotte any Shina no efa nakatona nandritra ny fizahàna. Ankoatra izay, sehatra maro amin'ny varotra amin'ny aterineto no nanàla ny vokatra mitondra ny marika Lotte, isan'izany ny JD.com sy ny Jumei Youpin.
Tsy nijanona teo amin'ny haban-tranonkala ihany ilay ankivy. Nisy hetsi-panoherana madinika nipoitra nanerana an'i Shina. Voalaza fa, maro ireo fiara marika Koreana no potika tany amin'ny faritanin'i Shangdong. Ary ito ambany ito ny lahatsary mampiseho ny porofon'ny ankivy teo ivelan'ny trano fivarotan'ny mpaninjara Lotte any Jilin.
‘Araho ilay antso ary ataovy ankivy izatsy sy izaroa’
Raha toa ka tondraky ny fanehoankevitra fitiavan-tanindrazana ny haino aman-jery sosialy Shinoa mpanome vaovao, dia nohamafisin'ilay mpitoraka bilaogy malaza, Wu Zuolai, tamin'ny Twitter tao ambadiky ny Rndrinafo Goavana, fa fanafenana ny tsy fahombiazana ara-diplomatikan'i Shina amin'ny fanarahana maso an'i Korea Avaratra — izay vao avy nandefa balafomanga efatra tany amin'ny Ranomasin'i Japana tamin'ny Alatsinainy 6 Martsa teo– io ankivy io :
Mandrisika ny olona hanao hetsi-panoherana ny tsy fahombiazana ara-diplomatikan'ny fitondrana. Paikady mitovy amin'ny fikomian'ireo mpanao ady totohondry nandritra ny Fitondran'ny Fianakavian'ny Mpanjaka Qing. Amin'izao fotoana izao, dia misy fahefana foibe izay mamoaka fomba fiasa anaty ho an'ny governemanta sy ny sampana rehetran'ny antoko, mitaky ny fandraisana anjara avy amin'ireo mpikambana ao amin'ny fikambanana tanora amin'ny hetsika fanoherana an'i Korea sy fanoherana ny Lotte. Orinasa Koreana ny Lotte ary tsy maintsy miasa ho an'ny tombotsoan'ny firenena. Tsy azonao ovàna ny maha-izy azy. Hanaratsy ny Shinoa mpiara-miasa amin'ny Lotte fotsiny io hetsi-panoherana io.
Nesoin'ny mpisera amin'ny Twitter ihany koa ny fanehoankevitry ny Xinhua :
Ny fanampiana ny tigra. Tsy afaka manaiky ny Lotte i Shina. Iza no mamotika kokoa, ny THAAD-n'ny Korea Atsimo sa ny baomba noklearin'i Korea Avaratra ? Tsy loza mitatao kokoa ve ny fanànan'i Korea Avaratra singa VX manapoizina retsika sy baomba nokleary ? Mbola mamefaka an'i Shina amin'ny tavany ihany i Kim III, nefa ny antoko Kaominista Shinoa dia tsy sahy na dia hangettra fotsiny aza, fa mbola manaratsy an'i Korea Atsimo, mandrisika ny fankahalàna, ny fanaovana ankivy ny orinasa koreana, tsy misy fotony ny governemanta toy izany.
Nangonin'ilay mpanoratra iray ao amin'ny Radio France Internationale ireo fanehoankevitra sasany mitsikera hita ao amin'ny haino aman-jery sosialy shinoa :
Tampoka teo, nisy fanontaniana lojika nipoitra. Nataontsika ankivy ny Lotte satria loza mananontanona ny fiarovam-pirenen'i Shina ny fametrahana ny rafitra THAAD amerikana any Korea Atsimo ka nahatonga antsika hamotika ireo fiarakodia marika Koreana. Ny fanontaniana dia ity, tokony ho Etazonia no fototry ny horohoro, ka maninona no tsy ireo finday Apple no ataontsika ankivy ?
Tena trangam-piarahamonina hafahafa izao. Toa mody liana amin'ny resaka politika ny olona, nefa sady tsy miraharaha politika : miresaka ny momba ny tombotsoan'ny firenena, ny fanjakana ary ny governemanta, ny fiarovam-pirenena sy ny voninahitra nefa tsy misaina ny zon'ny tsirairay, ny fahalalahana arsy ny fahamendrehana. Tsy miraharaha ny tsy rariny, ny fahantrana ary ny fahalemena manodidina azy ireo. Tsy sahy manenjika mpangalatra, tsy sahy manampy ny antitra, nefa sahy milaza fa hamotika an'i Japana sy hiady amin'i Etazonia…
Araho ny antso ary ataovy ankivy izatsy sy izaroa. Araho ny antso ary mamoteha fiara koreana vitsivitsy. Mahafaly ny fahavalontsika izany rehetra izany. Tsy mila manafika ny fahavalo fa isika no manafika ny vahoakantsika. An'ny vahoakanareo ireo fiara nopotehinareo, sa tsy marina izany?
Ho setrin'ny ankivy ataon'i Shina, navoakan'ny Korea Times, mpilaza vaovao mahazo tohana ara-bola avy amin'ny governemanta koreana, ny lahatsoratra nomena ny lohateny hoe “Grow up, China” (Mba mitomboa, ry Shina ), milaza an'i Shina ho zaza mihanta, amin'ny filazàna hoe :
…izahay Koreana dia tokony hanohitra izany sy hamaly ny fihantsiana ataon'i Shina amin'ny saina tony_ mikaroka ny fomba hampihenana ny fahavoazan'ny Lotte, mampihena ny fiankinana amin'i Shina amin'ny fanondranana entana ary mampiray ny feo politikantsika, mandra-pahitan'i Shina ny antony.